Niman geystay arrin aad u xun oo lagu xukumay gobolka Saaxil (NAXDIN BADANAA) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Niman geystay arrin aad u xun oo lagu xukumay gobolka Saaxil (NAXDIN BADANAA)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Barbera ee maamulka Somaliland ayaa waxa uu sheegayaa in ciidanka booliska ee gobolka Saaxil ay gacanta ku dhigeen seddax nin oo la sheegay inay kufsi wadareed kula kaceen gabar 7 sano jir ah.
Falkaasi kufsiga ah ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Berbera ee maamulka Somaliland, waxaana afartaasi nin lagu soo eedeeyay inay si xun u kufsadeen gabadhaasi yar oo da’deeda la sheegay inay ahayd 7 sano jir ahayd.
Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxil, Gaashaanle dhexe Mursal Xaaji Ciise ayaa kufsigaan ku tilmaamay mid laga xumaado oo murugo leh, wuxuuna sheegay seddaxdaas nin in la horgeeyay sharciga oo kiiskoodii uusoo dhamaaday.
Sidoo kale taliyuhu ayaa xaqiijiyay in mid ka mid seddaxdaasi nin lagu xukumay lix sano oo xarig ah, halka labada kalena lagu xukumay min laba sanadood oo xarig ah.
Dhinaca kale, taliyaha ayaa ka dhawaajiyay inuu jiro kufsi kale oo loo geystay gabar da’deedu tahay 8 jir, islamarkaana uu xukunka kiiskaasi uu dhawaan bilaaban doono.
“Waxaa jira kufsi kale oo lagula kacay gabar kale oo da’deedu tahay 8 jir, nin baa kufsaday taasina booliska ayaa gacanta ku soo dhigay, ninkii jeelka ayuu haatan ku jiraa, waana gar-suge, isaguna xukunkii uun buu sugayaa.” Sidaas waxaa yiri Gaashaanle dhexe Mursal Xaaji Ciise oo warbaahinta la hadlay.